RW Cumar oo Maanta ka dhoofay Garowe – Radio Daljir
RW Cumar oo Maanta ka dhoofay Garowe
Abriil 12, 2015 5:33 b 0
Axad, Abriil 12, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee Caasimada Dawladda Puntland ku sagootiyey raysal-wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo wefdigii uu hogaaminayey oo u ambabaxay magaalada Muqdisho .
Sagootinta raysal-wasaaraha iyo wefdiga la socday waxaa sidookale ka qeyb-qaatay Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Camey ,wasiiro iyo xildhibaano katirsan Xukuumada Puntland ,Saraakil ciidan iyo masuuliyiin kale duwan.
Ka hor inta uusan raysal-wasaaruhu ka dhoofiin garoonka diyaaradaha ee Garoowe ayaa Madaxweynaha iyo raysal-wasaaruhuba si rasmi ah xarunta PDRC ugu daahfureen shirweynaha koowaad ee wada tashiga maamul baahinta Gobolada iyo Degmooyinka Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dhsimaha golaha deegaanka ee Gobolada Puntland muddo sanad gudihiisa guulo waaweyn ay xukuumaddu ka soo hoyday, maadama degmooyin badan loo dhisay Gole deegaan.
” Waxaan idiin sheegaynaa hadaad shaqeyn weydaan oo awoodii loobaahna iyo shaqadii muhiimka aheyd ee ah in dadka aad u adeegtaan samayn weydaan qofna maahan geed meel ka baxay waad tagaysaan ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sidookale sheegay in faa’iido weyn ay kujirto dhamaystirka Golaha deegaanka ee degmooyinka Puntland, waxaana uu tilmaamay in degmo walba wax soo saarkeeda iyada uu dib ugu noqnayo shacabkeeduna ay ka faa’iidaysanayaan.
Raysal-wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa dawladda Puntland ku amaanay sida ay ugu dadaashay dhismaha golaha deegaanka ee guud ahaan degmooyinka Puntland, waxaana uu tilmaamay in ay tahay arrin ku daysho mudan.
Asaasida dawladaha hoose oo ku salaysan maamul wanaag iyo adeeg bixin, iyada oo la marayo ka qeyb-gal, la xisaabtan, hufnaan iyo in si wax ku ool ah looga faa’iidaysto kheyraadka xadidan waxay mira dhal u tahay dalka iyo dadkaba.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Hambalyo udiray Ciidamadda Xooga Soomaaliya
Qof Dumar oo isku sharaxday madaxweyna-nimada M.gobollada Dhexe